Na dia miantso ny isian’ny filamina aza ny SADC dia mbola sarotra kely ihany izay satria misy amin’ireo antoko politika eto amin-tsika mihintsy no efa natokana tsy ho tia filaminana. Anisan’izany ny TGV, ny MAPAR, ny TIM…
21 août 2018 à 14 h 35 min
Ny SADC dia niatso ny rehetra mba hilamina amin’ny fifidianana , ka nefa raha izao no miseho dia sarotra ihany ny hisin’ny filaminana satria efa hita soritra izao fa misy ireo kandida tsy manaraka lalàna dia izay no mety tsy hisin’ny filaminana ka mila andrasaina fanampahan-kevitra ny momba izany.
21 août 2018 à 14 h 41 min
Tokony hijanona @ maha mpanara-maso azy ihany ny SADC fa tsy mijabako loatra intsony @ raharaha ifotony toy izay nataony t@ 2002, nefa tsy nitondra vahaolana ho an’ny filaminana akory.
Ilaina tokoa ny fitoniana ao anatin’ny vanim-potoana aloha mandritra ary ao aorianan’y fifidianana, Ny tiako ho lazaina dia efa mikarakara fifidianna mangarahara ny CENI ka izay valiny eo dia tokony ho raisina amin’ny fitoniana daholo.
antoky ny fifidianana mangarahara ny filaminana ka rariny raha miantso izany daholo ny vondrona rehetra mandritra sy ahorian’ny fifidianana. Tsisy zavatra vita ao anaty korontana